Fitondrana vahaolana ho famongorana tanteraka ny hanoanana mitarazoka na kere | Primature
Mahazoarivo, 21 novambra 2020 – Nitohy tao amin’ny distrikan’i Beloha – Faritra Androy, ny dian’ny delegasiona tarihin’ny Praiminisitra, Lehiben’ny governemanta, Ntsay Christian any amin’iny tapany Atsimon’ny Nosy iny, ho fijerena ny zavamisy sy ny dingana efa vita ary fitondrana vahaolana vonjimaika, fohy ezaka ary lavitr’ezaka.
Ho famahana ny olana amin’ny fisian’ny hanoanana mitarazoka na kere ary dia napetraka ao Beloha ny “Kaly Tsinjo”, ary ezahina hiparitaka manerana ireo kaomina rehetra mandrafitra ny distrikan’i Beloha izany.
Nandritra ny fandraisam-pitenenany no nilazan’ny Praiminisitra fa “fanampiana vonjy maika ho an’ireo izay tena sahirana ihany izao nentinay izao, fa mbola hisy fandaminana hafa apetraka, indrindra fa ny vahaolana ho lovainjafy ka hiteraka fampandrosoana amin’ny lafiny rehetra eo amin’ny sehatry ny fanabezana, ny fahasalamana, ny rano ary ny fametrahana fotodrafitrasa maro”. Ary fanamby napetraky ny fitondram-panjakana ny “tsy hisian’ny distrika ho latsa-danja amin’ny hafa”, hoy hatrany izy.
Mba hahatongavana amin’izay tanjona izay anefa, dia notsiahivin’ny Lehiben’ny governemanta fa “ilaina hatrany ny fandrindrana ny asa, na amin’ireo tompon’andraikitra eny ifotony izany, na izy ireo sy ny fanjakana foibe, fa indridnra ireo mpiara-miombon’antoka tsy ankanavaka… Ny tandrevaka ataon’ireo tompon’andraikitra ety ifotony no mandoto ny fitondrana foibe”.
Ankoatra izay, dia nisy ny fivoriana niarahana tamin’ireo tompon’andraikitra isan-tsokajiny ao an-toerana nijerevana ny vahaolana maharitra, indrindra amin’ny famatsiana rano ny Faritra Androy. Ka tapaka fa handefasana “camion citerne” mamatsy rano aloha ireo toerana tena mila izany, ary ho jerena ny fomba hanitarana ireo “pipeline” efa misy amin’izao ka hitombo ny isan’ireo kaomina mahazo rano.
Noresahina nandritra izao fandalovan’ny Praiminisitra izao ihany koa ny mahakasika ny fandriampahalemana. Ary nanao jery todika sy nampatsiahy ny ezaka efa nataon’ny fitondram-panjakana amin’ny alalan’ireo mpitandro ny filaminana telo tonta ny Praiminsitra. Toy ny fanovàna rafitra eo anivon’ny Tafika, ny Zandarimariam-pirenena ary ny Polisim-pirenena mba hanatrarana ny vinan’ny Filohan’ny Repoblika dia ny hamerenena ao anatin’ny fotoana fohy ny fandriampahalemana. Ary efa nahitam-bokatra izany any amin’iny tapany Atsimo iny satria maro ireo tambajotra na asan-dahalo voafehy ary toerana mamokatra rongony fongana.
← Fitsidihan’ny Praiministra any amin’ny tapany atsimon’i Madagasikara-Amboasary atsimo
Conseil du gouvernement du Mercredi 25 Novembre 2020 →